Conveyor Fekitori - China Conveyor Vagadziri uye vanotengesa
Kushanda musimboti weiyo isina simba roller roller telescopic muchina: iyo telescopic roller yekufambisa uye yakajairika roller yekufambisa ndiyo imwecheteyo inoenderera yekufambisa michina iyo inoshandisa inochinjika conveyor bhandi senge zvinhu zvinotakura uye traction chinhu kutakura zvinhu kuburikidza nekufamba kweanotakura bhandi. Inofananidzwa neyakajairika roller conveyor, inowedzera bhanhire rekuchengetedza mudziyo, bhandi ichitenderera mudziyo uye nezvimwe nzira. Kana iyo tension mota ichienda kune muswe kumagumo, bhandi rinopinda mubel ...
Raceway conveyor yakakodzera kuendesa ese ese mabhokisi, mabhegi, mapallet nezvimwe zvinhu. Zvakawanda zvinhu, zvidiki zvinhu kana zvisina kujairika zvinhu zvinofanirwa kuiswa pamapallet kana mumabhokisi ekudzoka. Inogona kutakura chidimbu chimwe chezvinhu zvinorema kana kutakura hombe dhizaini mutoro. Zviri nyore kubatanidza uye kusefa iyo mitsetse yedhiramu. Inogona kuumba yakaoma logistics yekufambisa system ine akawanda dhiramu mitsara uye mamwe ma conveyors kana akakosha michina kusangana akasiyana maitiro maitiro. Inotakurika roller ...
Nyanzvi yekugadzira yekuendesa michina, mesh bhandi conveyor, chitakuriso. Conveyor bhandi nekusimudza conveyor bhandi muchimiro chePVP conveyor bhandi, simbi mesh bhandi, cheni bhandi bhandi, kutakura kwakatwasuka nekusimudza zvinogona kuva, erevheta yatinodaidzawo kukwira conveyor, kuitira kuti conveyor bhandi riwedzerwe nekusimudza partition uye padivi kunetseka kudzivirira kudonhedza padivi uye kutsvedza. Chimiro mafomu anosanganisira: yakatwasuka mitsetse irikuendesa, kusimudza kukwira kuendesa, nezvimwewo conveyor bhandi rinogona ...
Zvakanakira kukwira ketani conveyor: 1. Mutengo wakaderera, kuisirwa kumisikidza uye kugadzirisa, yakapusa chimiro, yakakwira kufambisa kumhanya uye kugadzikana. Kurumidza kudyisa bhandi conveyor, nhare yekurodha uye kudzikisa tirerail bhandi conveyor, 2. Yakagadzika irikupa, hapana hama inoenderana pakati pezvinhu uye conveyor bhandi, inogona kudzivirira kukuvara kune inotakura; uchienzaniswa nemamwe anotakura, ruzha rwudiki, rwakakodzera nharaunda yekushandira Chikamu chakanyarara chinodiwa. Madiki mavhiri akasimba erabha mavhiri ...
Brand sumo Kambani inogadzira kugadzirwa kwemaindasitiri anotakura, otomatiki gungano mutsara, bhandi conveyor, cheni ndiro conveyor, simba chinotenderera mutsetse, asiri simba chinotenderera mutsetse, kuturika mutsetse, kumhanya cheni kugadzirwa mutsetse, rinorema cheni ndiro kugadzirwa mutsetse, chivhariso-mutsetse , inoyerera tambo, kuchembera mutsara, uye zvimwe zvisiri-zvakajairika michina. chigadzirwa chigadzirwa technical ma parameter eo-bhandi roller roller mota Maparameter: akagadzirwa zvinoenderana nekuburitsa huremu, kuendesa nekukurumidza kana yevatengi dema ...